Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Denmark Christian Eriksen Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; 'Fikirka'. Dabeecadeena Eriksen ee caruurnimada iyo akhbaaraha aan la isku qorin Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor caan, nolosha qoyska iyo kuwo badan oo OFF iyo ON-Pitch xaqiiqda yar ee la yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay awoodiisa, hase yeeshee dadka yari waxa ay tixgeliyaan Christian Eriksen Biography oo ah mid aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, u ogolow.
Christian Eriksen Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Hore
Christian Dannemann Eriksen wuxuu ku dhashay Maalinta Jacaylka, 14th ee February 1992 ee Middelfart, Denmark by Dorthe Eriksen (hooyadii) iyo Thomas Eriksen (aabe). Xogta dhalashada ayaa ka dhigaysa ilmo gaar ah.
Wuxuu u koray sidii nin ciriiri ah, oo riyooyin ku riyooday, wuxuu ahaa mid xiiso leh inuu ogaado waxa mustaqbalka uu u hayo. Inkasta oo taageero waalidnimo, dhallinyarada Masiixiyiintu ay wax badan qaban karaan.
Christian Eriksen Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaan -Shaqo-bilaabid
Eriksen wuxuu bilaabay inuu kubada cagta ka ciyaaro oo ku yaala magaaladiisa Middelfart ka hor intuusan dhalashadiisa saddexaad.
Christian Eriksen Childhood Photo: Shaqada Bilowga
Laga bilaabo kubadda cagta da'da qandaraaska ayaa sidoo kale helay Louise Eriksen oo uu walaashiis ka waday inuu jecel yahay ciyaarta quruxda badan. Louise, oo haatan u ciyaara xulka qaranka ee dalka Denmark (sida wakhtiga qorista) ayaa jeclaan lahaa in ay la joogaan walaalkeed weyn.
Christian ayaa ku ciyaaray Middelfart G & BK ee 1992 ilaa 2005. 2005, wuxuu u wareegay Odense Boldklub, oo ku tartamayay tartamada dhalinyarada deenishka. Kooxdiisa ayaa ka badisay semi-finalka Brøndby. Christian ayaa loo magacaabay "Ciyaaryahan Farsamada Best" ee tartanka abaalmarinta. Tani waxay keentay in kooxo yurub ah oo ceyrsanaya isaga oo da'doodu yar tahay.
Christian Eriksen Hooyo Hore: Sheeko Caan ah
Christian Eriksen Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaan -Maxkamadaha
Markii uu da'diisu ahayd 15, wuxuu daawaday kooxo dhowr ah oo Yurub ah waxaana lagu casuumay inuu u safro wadamada 3 (Spain, Talyaaniga iyo England) si ay u tijaabiyaan Barcelona, ​​Milan iyo Chelsea.
Masiixiyiintu marnaba nasiib ma helin laga bilaabo maalinta uu helay martiqaadkan. Waxa uu helay waqti uu ku tababarto isaga xitaa ka dib markii uu tababar ku qaadanayay saaxiibadiisa kooxda. Hoos waxaa ku qoran sawirka isaga tababarka biyaha.
Christian Eriksen: Tababarka loogu talagalay maxkamadeynta
Masiixiyiintu waxay sidoo kale ku bixiyeen tababaro maalmo ah oo habeenkii la seexanayay daawashada cajalado badan sida Ryan Giggs, Zidane iyo Beckham si ay uga bartaan iyaga. Dhamaan kuwan ayaa loo qabtay si ay ugu suura geliyaan inuu si fiican u guto tijaabadiisa.
Christian Eriksen: Joogitaanka tooska ah
Nasiib darro, tan ugu xun ayaa dhacday. Labada kooxood ee Barcelona, ​​Milan iyo Chelsea FC ayaa ku guuldareystay inay aqbalaan. Dacwadiisii ​​ayaa noqotay guuldaro. Si kastaba ha ahaatee, tani ma ahan dhammaadka wiil yar. Tilmaamaha ayaa bilawday.
Christian Eriksen Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaan -Green Light
Waxa uu ahaa Ajax oo u keenay iftiin cagaaran. Waxay ku saxiixdeen 2008. Ka dib markii uu u ciyaarayay Ajax muddo labo sano ah, Christian Christian ayaa kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay xulka qaranka Denmark bishii March 2010, waxaana uu ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee Koobka Adduunka ee FIFA World Cup ee South Africa.
Christian Eriksen - Kulanka 2010 Koobka Aduunka
Xilligii Koobka Adduunka ee 2010 ayaa soo bandhigay horumar weyn oo loogu talagalay xiddiga da'da yar.
2011, Eriksen ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka kubadda cagta ee sannadka, kubada cagta ee kubadda cagta ee Holland, Ajax Talent of the Year (Marco van Basten Award), iyo wuxuu sameeyay UEFA Euro U-21 ee tartanka.
Waxa uu sidoo kale ku guuleystay Eredivisie oo Ajax ah 2010-11, 2011-12 iyo 2012-13 ka hor inta uusan u dhaqaaqin Tottenham Hotspur bishii August 2013, oo ah lacag ku dhow £ 11.5 million. Inta kale ee ay tiri, hadda waa taariikh.
Christian Eriksen Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Qoyska
Thomas Eriksen iyo Dorte Eriksen waa waalidiin badan oo ka mid ah xiddiga reer Denmark, Christian Eriksen. Fikrad ahaan, Masiixiyiintu waxay ka timaadaa asalka qoyskooda.
Waalidiintiisu waxay ku nool yihiin Middelfart, Danmark, halkaas oo uu Masiixa koray. Thomas iyo Dorthe labadaba inta badan waqtigooda ayaa wada akhriya wargeysyada ku saabsan wiilkooda baxsashada ee Yurub.
Christian Eriksen Waalidiinta- Thomas iyo Dorthe Eriksen
Aabaha dhalay Christian Eriksen wuxuu leeyahay nacas adag oo Chelsea ah. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in Chelsea ay markale calaamad u tahay Eriksen 'aad u tabar daran oo aan fiicneyn', sabab uu heystey maxkamad aan ku guuldareysneyn kooxda Galbeedka London.
Sida laga soo xigtay Thomas Eriksen, "Chelsea weli waxay dooneysay inuu heysto seddexaad oo maxkamad ah, laakiin waxaan u maleynayaa inaysan taasi aheyn. Ka dib markii uu laba jeer diido, waan dareemayNaadiga ma aheyn meel sax ah isaga. Maqnaanshaha Ingriiska ee Chelsea ma shaqeynayo, waxay si buuxda u qabaan sida ay ula macaamilaan ciyaartoyda dhalinyarada. Goobaha tababarka way wanaagsan yihiin - laakiin carruurtu waa inayan halkaas tagin. ' Tani waxay aheyd digniino digniin ah oo ay tuurtay Thomas Eriksen.
Inkastoo aabihiis uu ilaaliyo danta shaqada, maskaxaha masiixiga wuxuu u arkaa inuu yahay fiicnaantiisa iyo tan qoyska. Wuu jecel yahay.
Christian Eriksen iyo hooyo, Dorthe Eriksen
SIYAASAD: - Christian Eriksen waa 5 sano ka weyn oo ka mid ah Louise Eriksen oo keli ah oo keli ah oo keliya walaasha. Louise Eriksen ayaa dhowaan heshay baaqeeda ugu horreysa ee haweenka qaranka ee Danmark.
Waaliga Christian Eriksen walaashiis oo qurux badan - Louise Eriksen
Waxay ka ciyaartay booska islaamka sida Eriksen. Tababaraha dumarka Nils Nielsen ayaa sheegay inay iyadu leedahay awood u eg Christian, laakiin waxay aaminsan tahay inay ku fiican tahay ciyaaraha difaaca.
Sida uu u sameeyo wiilkiisa, Thomas Eriksen ayaa sidoo kale eegaya xirfadiisa gabadhiisa.
Louise iyo aabe, Thomas
Christian Eriksen Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Xiriirka
Sabrina Kvist Jensen waa saaxiibka haatan iyo saaxiibtiis ee Christian Eriksen.
Sabrina Kvist Jensen oo ah saaxiibka Christian Eriksen
Christian Eriksen halka uu ku riyaaqayo waqtigiisa Tottenham markii uu qirtay in kubada Ingariiska ay carqaladeeysay nolosha bulshada Sabrina.
Haa, shaki la'aan, Eriksen wuxuu qalbigiisa gelinayaa Tottenham si uu u qirto inuu ku dhibtooday inuu helo waqti uu ku baxo jacaylka noloshiisa Sabrina Kvist Jensen.
Wuxuu yiri: "Waxaan arkayaa ciyaartoy fara badan oo imaanaya Premier League iyagoo leh hamiyaal weyn, laakiin tani waa tartanka ugu adag adduunka.
Wuxuu sii waday ...
"Waa inaad barataa sida loola qabsado jirka iyo maskaxdaisbahaysi. Taasi waa arrin aad u adag saaxiibadayda. Dabcan waxaan jeclaan lahaa in aan magaalada ka baxo iyada iyo asxaabteeda, laakiin ma ahan mid ku haboon in lala ciyaaro England. Seddex ama afar maalmood oo kasta waa inaan fuliyaa heerka ugu sarreeya, inkastoo ay taasi jirto, waxaan heystaa hamiyaal weyn iyo riyooyin si aan halkaan ugu guuleysto. "
Eriksen ayaa intaa ku daray: "Dadku waxay qabaan in ciyaartoyda xirfadlayaasha ah ay leeyihiin shaqo fudud, oo aan tababarno laba saacadood ka dibna tago guriga. Uma shaqeyneyso sidaas. Si aad u diyaarsato ciyaarta soo socota, waxaad u baahan tahay inaad nasato, hurdo, cunno aad u wanaagsan, oo jirkaaga ilaalisa. Qaar ka mid ah ciyaartoyda waxay ubaahan yihiin cilmi-nafsi isboorti, laakiin ma ahan maxaa yeelay aniga ayaa wax walba sameeya. "
Inkasta oo uu cabasho ka muujiyay, Christian ayaa wali isku dayaya inuu baxo Sabrina Kvist Jensen.
Christian Eriksen iyo Sabrina Kvist Jensen oo ku riyaaqaya waqti tayo leh
Christian Eriksen Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaan -Personality
"Waa mid qaas ah" Pochettino ayaa u sheegay The Mirror ku saabsan Eriksen. "Waxaan mar walba u yeeray 'Golazo' - sababtoo ah wuxuu awoodaa inuu dhaliyo goolal aan la rumeysan karin. Aqoonsiga naga helaya waa mid weyn. Waxa uu dareemayaa in aan isaga jecel nahay. "
Pochettino socotay ..
"Waa run in uu yahay mid degan, si degan, waa qof aad u xiisa badan laakiin wuxuu jecel yahay kubada cagta. Waa ciyaaryahan aan u baahneyn wax badan oo ku saabsan taageerayaasha, warbaahinta, dadka ka baxsan.
Sheekada Carruurnimada Martin Braithwaite Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada ee Kasper Schmeichel iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Yussuf Poulsen Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Andreas Christensen Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha